Vaovao Mafana · Jona, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Jona, 2013
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Jona, 2013
Eoropa Afovoany & Atsinanana 19 Jona 2013
Eoropa Andrefana 14 Jona 2013
Nozaraina be tao amin'ny Twitter amin'ny tenifototra hoe #RaúlLibertad ireo vaovao momba ny fisamborana ilay mpaka sary mpanao gazety Raúl Capín, tany Madrid. Voasambotra ihany koa i Adolfo Luján, mpaka sary mpanao gazety. Hafatra maro maneho fahatezerana sy manohitra ny famoretana ny mpanao gazety izay mitatitra ny fikomiana ara-tsosialy no mifanaretsaka ao amin'ny aterineto.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Jona 2013
Nivadika ho herisetra ny raharaha tany Istanbul rehefa nanaparitaka ny mpanohitra izay nanao izany ampilaminana ny mpitandro ny filaminana ny Zoma 31 May teo. Efa ho dimy andro lasa no nanombohan'ny fitokonana andalam-be ampilaminana nahitàna vondron'olona maro niaraka nanohitra ny drafitry ny governemanta hanavaozana ny tanan-dehibe amin'ny fanalàna ireo hazo maniry ao amin'ilay hany faritra maitso any Istanbul: ny Gezi Park. Ny herisetra nampiharin'ny mpitandro ny filaminana -- entona mandatsa-dranomaso, tifitra rano, totohondry sy kibay -- mba hanaparitahana ireo mpanohitra hiala eo amin'ny kianja no niteraka fanoheram-bahoaka, vantany vao nameno ny tambajotra sosialy ny sarin'ireo olona, ka isan'ireny ireo ankizy sy antitra niaro tena tamin'ny entona mandatsa-dranomaso.